MUCJISO: Goolhaye LIX Farood Ah Oo Ka Arkay, Miyuuse Faa’ido Ku Qabaa, Isagaa Ka Jawaabay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
MUCJISO: Goolhaye LIX Farood Ah Oo Ka Arkay, Miyuuse Faa’ido Ku Qabaa, Isagaa Ka Jawaabay
November 14, 2017 at 13:11 MUCJISO: Goolhaye LIX Farood Ah Oo Ka Arkay, Miyuuse Faa’ido Ku Qabaa, Isagaa Ka Jawaabay2017-11-14T13:11:09+00:00 CAYAARAHA
EDSON PEREIRA LISBOA, waa goolhaye 32-sano, jir ah, kaasoo u dhashay wadanka Brazil, wuuxuna udheelaa kooxda heerka koowaad ee dalkaas, ABC, isagoona waayihiisa kubada cagta soo maray heerar kala duwan.
Xidigaan ayaa waxaa uu leeyahay islamarkaana uu kaga duwan yahay goolhayayaasha kale, Lix farood, waxaana ay tahay calaamad ay aad ula yaabaan dadka badan, sida uu isaga nafsi ahaantiisa uu qiray.
Isagoo wareysi siinayay Wargeyska Journal O Sul, oo Brazil laga leeyahay ayaa wuxuu yiri: “Dad badan ayaa i wey diida in farta lixaad aan u adeegsado si gooni, balse maya, waxaan adeegsadaa mida caadiga ah ee Shanta farood.
Wuxuu sii raaciyay: “Kuwa kale, ayaa I weydiiya in marka leyskugu soo gano kubad kulul, ay faa’ido gooni ah ay leedahay, balse waxba, kuma haysto, waa sidii horey, oo ma jirto, waxa ay dadku sheegayaan.
Laacibkan ayaa xiligii uu yaraa waxaa leysku deyay in khaliin looga sameeyo gacanta, si looga jaro fartaan, balse, taasi ma aysan dhicin waa waxaa diiday Hooyadiisa, iyadoona ay tahay wax uu ALLE ku uumay.
« Gaadiidka Ciidanka AMISOM oo lagu weeraray Qarax Is-miidaamin ah
Qarax ka dhacay Duleedka magaalada Muqdisho [Sawirro] »